Shuruudaha lagu helo dhalashada Denmark oo la adkeenayo, ( Heshiis Cusub ) Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkShuruudaha lagu helo dhalashada Denmark oo la adkeenayo, ( Heshiis Cusub )
Shuruudaha lagu helo dhalashada Denmark oo la adkeenayo, ( Heshiis Cusub )
April 22, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Denmark ayaa qorsheyneysa inay adkeyso shuruudaha dhalashada, kadib heshiis dhexmaray dowladda iyo seddex xisbi mucaarad ah. Waddanku wuxuu horeyba u leeyahay mid ka mid ah siyaasadaha socdaalka ee Yurub.
Dowlada Denmark ayaa Talaadadii maanta shaacisay inay adkeyneyso shuruudaha dhalashada, marka laga reebo dadka lagu helay dambiyada. Shuruucda cusubi waxay daba socotaa heshiis ay wada galeen xukuumada Socialdemokraterna raisal wasaare Mette Frederiksen iyo sadexda xisbi ee mucaaradka midig
“Qaadashada dhalashada deenishku waa cadeyn weyn oo bulshada deenishka ah, sida ay qabaan dhinacyada heshiiska wada galay. Sidaas awgeed waxay isku waafaqeen inay lagama maarmaan tahay in sare loo qaado qofka noqon kara muwaadin deenish ah,” ayay wasiirada socdaalka ku tiri bayaanka.
Mustaqbalka, codsadayaasha dhalashada deenishku waa inay muujiyaan inaanay jirin wax dambi ah oo lagu xukumay iyo inay shaqeeyeen ugu yaraan saddex sano iyo badh safartii sano ee ugu dambaysay.
Heshiiska ayaa sidoo kale xooga saaraya “qiyamka deenishka”. Tijaabooyinka muwaadinimada, oo la isticmaali jiray tan iyo 2015, ayaa hadda waxaa ku jiri doona shan su’aalood oo ku saabsan qiyamkan.
Sharuudaha ayaa kamid ah in qofka helaya dhalashada Wadanka uu ku milmay bulshada inteeda kale.